MINI KALANCHOE - KALANDIV: DARYEELKA EE WARSHADDA GURIGA, SAWIR - SOOSAARKA DALAGGA
Kalanchoe Kalandiva - bouquet ubax on windowsill ah
Kalanchoe Kalandiva (Kalanchoe Kalandiva) - Gardarrada nooc ah oo ka tirsan qoyska Tolstiankov.
Dhammaan xubnaha qoyska waa suuliyayaal. Dabeecadda, waxay ku nool yihiin kulaylaha Afrika iyo Koonfurta Ameerika.
"Aabbe" Kalanchoe Blossfelda waa wakiil dhalaalaya oo qurux badan. Waxay ka duwan tahay faracadan ubaxyo fudud oo fudud, Kalandives waa terro.
Kalandiva - Geedka dhirta oo aad u liita, sida noocyada kale.
Waxa ugu weyn sharaf - Bloodhuuh muddo dheer.
Haddii ay jiraan xaalado wanaagsan, waxay socon kartaa ilaa lix bilood.
Muuqaal kale - Blooms jiilaalka, inta badan u furan ilaa Sannadka Cusub.
Sida succulent wuxuu leeyahay qaro isku wareegsan, cufan ayaa lagu daboolay caleemo cufan. Caleemaha waa tiro badan, laanta si wanaagsan uuna soo saaro xididada aalkolada.
Taarbo caleen ah ayaa lagu rinjiyeeyay midab madow oo mugdi ah, dusha sare ayay u buluugantahay. Foomka - wareegsan ama oching, geesaha ayaa gooyaa ilkaha soo noqnoqonaya.
Duufaanta TerryWaxay ku yaalaan pedunctu gaaban, isku duub galka digaagga.
Midabku waa mid kala duwan, waxaa ka mid ah casaan, oranji, midab, casaan iyo jaalle ah.
Isku qas - farac ka mid ah Kalandivers minigalka. Main faraqa laga bilaabo waalidka - ubaxu wuu sii wadi karaaiyada oo aan hakad gelin sanadka oo dhan. Noocyada daryeelka halkaas jooga.
Heerkulka qolka caadiga ah ee u dhaxeeya 22-27 ° waa Kalandiv oo ku habboon.
Waxay u dulqaadaneysaa hoos u dhac muddo gaaban oo heerkul ah ilaa 6-9 ° iyo kuleyl kasta, ilaa 40 °.
Haddii aad rabto in aad ku guuleysato ubax dheer - meel marti ah oo Afrika ah oo ku yaal daaqadda koonfureed.
Kalandiva wuxuu jecel yahay iftiin badan, oo aan ka baqin shumacyada tooska ee qorraxda.
Inaad ku jirto bariga iyo dhinaca galbeed ee guriga ma sameysna duufaan.
Intaa waxaa dheer, caleemaha bilaabi doonaa in ay kala fidiyaan oo dhuuban, caleemaha waxaa laga heli doonaa meel fog, oo si weyn u soo bandhigaya asliga ah. Kalandyva waxay lumisaa muuqaalkeeda soo jiidasho leh.
Sida succulent iyada uma dulqaadanayo waraabin badan iyo biyo badan.
Qoyaanka dhulka joogtada ah waxay dhalin doonaan cudurada fangas.taas oo keenaysa lafaha xididdada iyo asliga ah. Abaarta ayaa ku dhuftey warshad aad u yar, markaa ha daadin.
Aad ufiican qoyan ciidda 6-8 maalmood oo kasta, xataa xagaaga. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad sugto ciidda si aad uga qallajiso kor.
Isla markiiba ka dib markii la waraabiyo, biyaha oo ku dhuftay godka ayaa u baahan in la daadiyo. Growers-ku waxay ku talinayaan xitaa tirtiridda qalalan iyo hoose ee dheriga iyo digsiga.
Wixii adeegsan waraabinta biyaha keliya oo la jilciyey. oo leh qadar yar oo lime ah.
Si aad tan u sameyso, biyaha tuubo waa in la difaacaa ama la kariyaa, ama codsanaa dhalaalid iyo roob. Haddii kale, foomamka weerarka dusha sare ee dhulka, taas oo ka hortagi doonta marinka hawada si xididada.
Haddii xilliga qaboobaha si qolka qabow loogu hayo, waraabinta waa la yareeyey, kordhinta mudada u dhexeysa habraacyada 5-7 maalmood.
Ha welwelin - ma yeeleyso isaga. Laakiin qoyaanka xad-dhaafka ah ayaa dhab ahaantii hubaal ka dhigaya lafaha xididdada iyo saldhigga afkoda.
Kalandyva uma baahna qoyaan xoog leh.
Ha ku buufin ama ha ku gelin weel biyo ah. Waa wax ku filan in la tirtiro caleemo ka timaadda badeecada mararka qaarkood ama si loogu diyaariyo qubeyska qabow ee ujeedadaas.
Boorashku wuxuu xirxiraa stomata iyada oo geedka ay ururiso qoyaan iyo faragelinayaan horumarka caadiga ah.
Bacriminta ugu muhiimsan, gaar ahaan inta lagu jiro ubax, waa potassium iyo fosfooraska. Waa in si joogto ah loo sameeyaa - si gooni ah ama si wadajir ah.
Wareegga u dhexeeya dhejiska caadiga ah waa 10 ilaa 15 maalmood.
Iyo halkan dharka sare maadooyinka jirka waxaa lagula talinayaa in la xadido ama aan la isticmaalin dhammaantood, maadaama ay ku jiraan waxyaabo badan oo nitrogen ah.
Maaddadani waxay sababtaa naaxinta ubaxa, waxay bilaabeysaa inay si weyn u koraan caleemaha cagaaran iyo caleemaha, oo waxay illoobaan ku saabsan ubaxyada.
Marka ugu fiican, waxaad heli kartaa inflorescences yar oo fiiqan, kuwaas oo dhawaan ku dhici doona.
Xaaladda guud - Kaadida biyaha iyo hawada wanaagsan, sidaa daraadeed, waa suurad wacan in la isticmaalo ciid dabacsan oo dheecaan leh.
Isku habboon oo isku dar ah peat, ciid, humus, ciidda beerta iyo perlite. Waxa kale oo aad ka iibsan kartaa ciidda diyaar u ah - universal ama khaas ah suulin iyo cacti.
Kalandiva wuxuu bilaabaa inuu Bloom inta lagu guda jiro xilliga dayrka gaaban - xilliga jiilaalka.
Iyada oo ay ku jirto maadada saxda ah, waxay socon kartaa 6-7 bilood.
oo korkoodana geedka waa inuu nastaa qiyaastii hal bil qol qol mugdi ah.
Kalandyva waxaa laga saari karaa miiska hoostiisa ama qolka qarkood oo keligiis keligood ka tagay, mararka qaarkood waraabinta si aysan u engegin.
Habkani waa mid muhiim u ah Kalandifiyada!
Gooyo waxay dib u soo noolaataa geedka, waxay ku siisaa qaab qurxin oo qurux badan, waxay ka caawisaa sidii loo heli lahaa wax beerto.
Intaa waxaa dheer, qaliinka ayaa bixiya Bloodhuuh mustaqbalka, sababtoo ah ubaxyada waxaa la aasaasay oo kaliya on apical dhalinyarada afkoda. Gooyaa waxaa lagu sameeyaa isla markiiba ka dib markii ubax, iyadoo la isticmaalayo qalab fiican oo loo yaqaan '.
Caleemaha waa la gooyn karaa gebi ahaanba, kadibna kuwa cusub waxay abuuri doonaan baadiyaha yar yar.
Isla markiiba ka dib iibka, waa in lagu beeraa ciidda dhabta ah - dukaanka dhirta waxaa lagu hayaa ciidda ku meel gaarka ah ee aan haysan guryaha nafaqada.
Haddii Kalanchoe Blooms - waxaa lagu talinayaa in la sugo dhamaystirka nidaamka.
Ka dib markii laga saaro dheriga, nidaamka asaasiga ah ayaa la raaciyaa biyo socda si ay si buuxda u dhaqaan meesha hadhay ee substrate.
Qalitaanada ku-meel-gaarka ah lagama-maarmaan ah sanad walba, maadaama ayan weyneyn.
Waa ku filan in lagu beero dhirta 2-3 sano, gabi ahaanba badalida ciidda leh mid cusub.
Tan iyo aragtida isku dhafan waa kalandivy hybridmarkaa daryeelka guriga waa ka duwan yahay.
Kala saarista guud ahaan ma keenayso wax dhib ah iyo walwal, tan iyo markii la sameeyay Kalandiva waxay u egtahay mid aad u jecel. Habka ugu khatarsan iyo waqti-qaadashada - abuur, laakiin waxay si toos ah u isticmaalaan.
Ka dib dhan, Kalandiva waa warshad isku dhafan oo ma gudbiso tayada noocyada kala duwan marka la faafiyo abuurka.
Inta badan badanaa Isticmaal guntinta stemharay ka dib markii la gooyey geedka. Badanaa waxay horey u leeyihiin xididada, markaa uma baahna rooting.
Gooyn kaliya meeleeyay substrate peat dabacsan, ciid, vermiculite iyo humus iyo waraabiyo sida caadiga ah. Gooynta aan lahayn rootiga waxaa lagu daboolaa kala badh quraarad caag ah si loo abuuro saameyno aqalka dhirta lagu koriyo si dhakhso ah.
Geedka lagu koriyo ayaa la saaraa marka koritaanka firfircoon ee seedling bilaabmaa, oo muujinaysa guusha hawsha. Dhirta koray ayaa loo wareejiyaa ciidda oo buuxa.
Cagaarshowga qaadataa wax badan muddo dheer, mana aha mid ka duwan kala soocista.
Waxaa loo isticmaali karaa daawaynta rhinitis iyo cudurada maqaarka.
Awoodda bakteeriyada Juice cusub ayaa ka caawiya in laga takhaluso fungi, bakteeriyo badan iyo fayras.
Qalabkan waxaa loo isticmaalaa daawaynta boogaha, buunshaha iyo boogaha oohinta. Cabbirada laga soocayo casiirka iyo saliida dufanka waxaa loo isticmaalaa gubashada, nabarrada, barafka.
Juice-ga wuxuu daaweeyaa erysipelas, xididada baradhada iyo cudurka psoriasis. Ka qaadista gudaha waxay yareyn doontaa avitaminosis iyo kolesteroolka hooseeya.
Bixiyeyaasha muuqaalkeeda waxay diyaarinayaan ka hor qoyaanka xad dhaafka ah. Si aad u bogsato dhirta, isticmaal fungicides oo ku jira copper.
Tani - Oksihom, Abiga-Peak, Bordeaux isku dar, copper sulfate. Kalandyvu ayaa laga saaray maqaallada, yareeya waraabinta.
Kalluun kala duwan
Kalandiva oo ay soo gaadheen weerarradooda iyaga oo aan ka yarayn succulents kale.
Dhammaan qaybaha ay saameysey waa in la gooyaa unugyada caafimaadka qaba.
Qaybaha waxaa lagu daaweeyaa qoryo la jajabiyey ama kaarbiidh firfircoon, fungicides waxaa loo isticmaalaa - Fundazol, Acrobat MC, Profit Gold, Ordan, Scor, Iskuduwaha.
Cayayaanka khatarta ah ee aan weligood weerarin, waxay doorbidaan dhirta "dhadhan fiican leh".
Kalandiva - qurux badan Kalanchoe kala duwanku habboon gudaha gudaha.
Waxaa la kori karaa xitaa dadka beeralayda ubaxa ah iyo dadka aadka u mashquulsan oo illoobi kara dhirta waqtigooda.